Iyo 14.3 yekuvandudza yeiyo HomePod uye HomePod mini yave kuwanikwa | IPhone nhau
Kwidziridzo 14.3 yeHomePod uye HomePod mini yave kuwanikwa
Rimwe zuva mushure mekuburitswa kweIOS 14.3, kusiyana nezvakamboitwa zvapfuura, vakomana veApple vakaburitsa nyowani nyowani yeiyo HomePod uye HomePod mini, inogona kuitwa neichi chishandisobequeath vhezheni 14.3 ichizvienzanisa neiyo yazvino vhezheni inowanikwa kune ese iOS uye iPadOS.
Zvinoenderana nezvakanyorwa zveyazvino kuvandudzwa, Apple yakangotarisa pane kuvandudza kugadzikana uye kuita mune zvese zvishandiso. Kuti tione kana chinhu chitsva chave chaicho chakawedzerwa chinopa chero chiratidzo nezvezvinoitika mune ramangwana, isu tichafanirwa kumirira kune vanogadzira kuti vazviongorore, asi zvinoita kunge zvisingaite.
Iyi yekuvandudza inosunungurwa mwedzi mumwe mushure mekuburitswa kweshanduro 14.2 yeiyo software inotarisira iyo HomePod, vhezheni yaisanganisira mashandiro matsva aSiri uye intercom basa iyo Apple yakazivisa payakaunza iyo HomePod Mini.
Ichi chimiro chinokutendera iwe kushandisa Apple Smart Mutauri ku tumira mameseji ezwi kune mamwe maspika akabatana uye kuti ivo vari mumusha mumwe chete, basa iro pasina mubvunzo rinobatsira kutengeswa kweiyo diki HomePod, kunyangwe nemutengo unoshamisa uyo wasvika nawo pamusika, haudi zvakawanda zvimwe zvinokurudzira zvevashandisi kuvhura iye.
Kana iwe uine otomatiki inogadziridza yakavhurwa pane HomePod haufanire kuita chero chinhu zvachose kuitira kuti ivandudzirwe kuvhezheni itsva. Kana zvisiri, iwe unofanirwa kuwana iko Kumba kunyorera uye kuwana HomePod kurodha pasi nekuisa iyi nyowani yekuvandudza.
Mune Actualidad iPhone isu tatova nemukana wekugadzira ongororo yeiyo nyowani HomePod mini, saka kana zvakadaro Iwe hauna kunyatso kujeka kana iri sarudzo yakanaka, Ini ndinokuraira iwe kuti utarise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Kwidziridzo 14.3 yeHomePod uye HomePod mini yave kuwanikwa
Ko kana iyo inotevera Apple Watch ichisanganisira Kubata ID uye iri pasi-screen kamera?
Apple inotarisira kuwedzera kudiwa kwe iPhone muna Ndira